VLC media player waa tan ciyaaryahanka ugu muhiimsan ee warbaahinta la isku hallayn karo ee suuqa kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u qabtaan hawlo taas oo ciyaartoyda kale marnaba ogolaan user ay u qabtaan. Mid ka mid ah qaababka sida oo ka mid ah ciyaaryahan warbaahinta VLC waa in la hubiyo in Screenshot waxaa lagu qabtay habka ugu wanaagsan si ay weraro movie jecel yihiin diinta desktop asalka iyo sawirada xitaa wareejiyo mobile iyo wadajirka kuwa kale ee isticmaala. Talaabada ugu muhiimsan ee la xidhiidha in tutorial tani waa in NIDAAMKA qaadashada Screenshots ON VLC WAA ISKU MID daaqadaha IYO MAC. Si kastaba ha ahaatee si looga fogaado isaga mid laba nidaam oo kala duwan oo fudud lagu xusay in arrintan la xiriira marka ay timaado tutorial this.
Part1: Qaado Snapshots Screen in VLC Media Player on Mac
Part2: Qaado Snapshots Screen in VLC Media Player daaqadaha
Part3: FAQ ku saabsan VLC
i. User wuxuu u baahan yahay si loo bilaabo media player VLC si interface soo socda u muuqataa,
ii. User ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in la doonayo video waxaa ciyaaray sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
iii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in guji video doorasho gudahood bar ugu weyn on sare ee VLC ciyaaryahan warbaahinta kuwaas oo loo arki karaa in sawirka oo uu soo dhejiyo hoos ku qoran:
iv. Ikhtiyaarka ugu danbeysay ee liiska waa qaadan sawir si user ay u baahan tahay si ay u riix kaas oo lagu soo bandhigay hoos ku qoran:
v. On Mac shaashadda waxaa si otomaatik ah ku badbaadi doontaa on desktop ka halkaas oo user ka heli karaan mar walba oo uu doonayo iyo in uu dhamaado habka sidoo.
Qaybta 2. Snapshots Qaado Screen in VLC Media Player daaqadaha
Habka qaadashada Screenshot nidaamka Mac iyo daaqadaha waa si kastaba ha ahaatee mid ah loogu talagalay oo ka mid ah dadka isticmaala hab oo kala duwan la soo sheegnay doonaa daaqadaha si user marnaba wajahaya arrin kasta oo arrintan la xiriira:
i. Si aad u bilawdo habka user ay u baahan tahay in ay laba jibaaraan guji warbaahinta VLC ka icon si screen soo socda u muuqataa,
ii. User ayaa haatan u baahan yahay inuu u ciyaaro video ah shaashada ka mid ah taas oo loo baahan yahay sida hoos ku qoran:
iii. Tallaabada u socda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in badhanka iftiimiyay la isku soo riixayo in ay qaataan shaashada la doonayo sidii loo sawiray sawirka hoos ku qoran:
iv. In daaqadaha shaashadda waxaa si toos ah qabtay C: \_ Users \_ username \_ Sawiro My ka halkaas oo user iyaga ka heli karaan iyo sida loo isticmaalo sida ay u doonayaan iyo doonistiisa.
Qaybta 3. FAQ ku saabsan VLC
Ka dib markii qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan oo fool user inta la isticmaalayo VLC inay qabsadaan Screenshot jawaabta ayaa sidoo kale ku xusan ee hoosyimaada halkan:
1. dhekhso VLC aan shaqayn
Waa mid ka mid ah sababaha ugu badan oo keeni in arrimaha iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in hogaanka update ffmpeg inay xiisaddan.
i. User wuxuu u baahan yahay si ay u helaan Dooratay VLC sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay si ay u helaan fursado video ah sida kaaga muuqata sawirka hoose:
iii. User xaq u baahan yahay in la beddelo qaabka ay u JPG si loo hubiyo in arrinta la xalin:
2. VLC si dhekhso toobiye
Wixii MAC toobiye ama hotkey waa Command + alt + S
Wixii Windows toobiye ama hotkey waa Shift + S
Waxaa sidoo kale in la xuso in toobiye daaqadaha sidoo kale khuseysaa Linux iyo UNIX ka hawlgala nidaamyada iyo sidoo.
3. line si dhekhso amarka VLC
Sida ku xusan hor line amarka ama amarrada keyboard ah ciyaaryahan warbaahinta VLC ku kala duwan yihiin marka ay timaado nidaamyada hawlgalka si kastaba ha ahaatee waxa ay sidoo kale in la xusay in doorashaada leh waa la bedeli karaa in geedi socodka soo socda waxaa la socda sida ku xusan si arrinta loo xalin lahaa ee waa danta ugu fiican ee ugu user iyo amarrada la siiyo sida fudayd ee user ee arrintan la xiriira per. Si aad u bedesho goobaha la doonayo user ay u baahan tahay in la raaco jidka sida qalabka> doorbidida> Hotkeys sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
Haddii kale user ayaa sidoo kale dib karaan waxa ay rabaan si loo hubiyo in default ciyaaryahan VLC goobaha waxaa loo isticmaalaa haddii user ka dareemayso iyaga la.
4. Sida loo qaado tayada sare Screenshot VLC
Inta badan dadka isticmaala ay sidoo kale dhibaatooyin ku soo wajahaan arrintan la xiriira sida Screenshot in laga qaadayaa waa gaaban heer sare ah. Jidka si xal waa qalab> doorbidida> video> qaab sida hoos loo arki karaa:
Sida tijaabo user ay u baahan tahay in ay qaataan Screenshot la beddelo qaab mar kasta si loo hubiyo in tayada ugu wanaagsan iyo wax soo saarka ahbaa sida ay baahida user. Qaabab waxaa la xiriira hardware ee habka sidaas waxaa lagula talinayaa in ay hubiso inay qaadato mid ka mid ah saddex Screenshot kala duwan oo nooc kasta oo qaab si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la doortay mustaqbalka.
> Resource > VLC > Qaado Snapshots in VLC Media Player daaqadaha iyo Mac